Posted by စိမ်း... 25.9.09
သိပ်ချစ်တာပဲ ဆိုတာလေးကို ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးရဲ့…
အဓိပတိ နဲ့ ခရေပင်
ခကွေးကို ယပင့်နဲ့ ချစ် ခဲ့တယ်ဆိုတာ…ယုံ…
သူငယ်ချင်းလား ရည်းစားလား …
ချေးများတတ်တဲ့နင် … ငါ့ရှေ့မှာ မညည်းတွားနဲ့လေ
စီးပွားရေးလုပ်နေတာမှ မဟုတ်ပဲ …
လျှော့ပေးစရာ ဘာအကန့်မှ မရှိဘူး …
နင်လည်း … ကောင်းမယ်ထင်တာလုပ်ခဲ့တာပဲလေ…
မျိုးကျော့မြိုင်သီချင်းကို တစ် နှစ် သုံး ပြိုင်တူ အော်ပြီး
မုန်းခဲ့ကြတာပဲ … ငါ့ဆံပင်တွေတောင် ခါးထိရော့မယ်…
တစ်ဆိတ် နောက်ကျလွန်းပါတယ် …
(ဖတ်ဖူးတဲ့လူများ တိတ်တိတ်လေးနေပါ... ရှူးးး တိုးတိုး မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်... :P)
M September 25, 2009 at 5:24 AM
ရှူး ... ကဗျာဖတ်နေတယ် :P
M September 25, 2009 at 5:27 AM
သြော .. ဂလို အခြေအနေတွေတောင်ဖြစ်ကုန်ပေါ့ ..
ဆံပင်ရှည်ထားတာ အဲ့တာကိုပြောချင်လို့လား ... :D
လင်းသု September 25, 2009 at 7:02 AM
သိပ်ကောင်းတဲ့ အရေးအသားလေးပဲ ..
kiki September 25, 2009 at 7:09 AM
ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဇီးပြားခိုးစား ..အဲ..
ရီးစား ခိုးထားခဲ့ကြ တာ ကို ..
သူများတွေ မသိအောင် နေပါ့လားလို့..
ပရဲ့ ဇီးဒဲန့် ရဲ့နောက်ဆုံးခုံတန်းလေး တွေ အကြောင်း မေ့နေပြီလား ..စိမ်းရယ် ..
ဂတုံးဆံပင် ကနေ .. ခါးထိအောင်ဆိုတော့ အတော်ရှည်ခဲ့မှာပေါ့ ကွယ်...
နောင်တ ရ မိတာကတော့ ..
မင်းကို ဘာလို့ ဒီ့ထက် စောစောစီးစီး လမ်းမခွဲခဲ့ တာလည်း ဆိုတာပါပဲ ..
ရောယောင် သွားပါ၏ ။။
လင်းဒီပ September 25, 2009 at 8:11 AM
အခုမှ ဖတ်ဖူးတာပါ ညီမရေ...
လူဆိုတာ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ပဲတွေး..:P
ဝက်ဝံလေး September 25, 2009 at 9:13 AM
နောင်တ မရပါဘူး ဘာလို့ရရမှာလဲနော့် ဟိဟိ ကြော်ငြာဝင်တာလား ဆံပင်ရှည်ဆိုတာ ဒါဆိုလဲ ဖြတ်ပြီးရောင်းစားလေ ဆံပင်ဈေးကောင်းတယ် ဆိုပဲ ဟက် စ တာနော် ဘိုင် တာ့တာ
. September 25, 2009 at 9:22 AM
.......... ဒီ ကဗျာလေးး သိပ်ကြိုက်တယ်........
အခုမှ သိတယ် ..........
ဒီ ကဗျာ အမ ရေးးးတာကိုးးးးးးးးးး
( တစ် နှစ် သုံးး ပြိုင်တူအော်ပြီး မုန်းခဲ့ကြတာပဲ ဆိုတဲ့ စာသားလေးး ကြိုက်တယ် ....... )
တစ်ခုခု September 25, 2009 at 9:36 AM
အင်း... ငါကတော့ မကောင်းတာပဲ ပြောတတ်တာ နင်သိပါတယ်... ဟဲဟဲ.. ဒါပေမယ့် အကောင်းပြောမှာပါ... စာလုံးပေါင်းနည်းနည်းမှားနေတယ်ဟ... တစ်ချို့နေရာလေးတွေ... နောက်ဆို ငါ့ဆီအရင် ပို့လိုက်... ငါ အက်ဒီတာလုပ်ပေးမယ်... နင့်ရဲ ပေါတောတော သွပ်တွပ်တွပ် ဦးနှောက်ထဲမှာ ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေ ရှိနေပါသေးလားဆိုတာတော့ ငါသိသွားတယ်....
ပြည့်စုံ September 25, 2009 at 9:58 AM
အခုမှ မျက်ရည်ကျတာ နောက်ကျသွားပြီပေါ့လေ...
ဆံပင်တွေဖြူ သွားကျိုးပါစေ ...
သံလွင် HeRo September 25, 2009 at 10:00 AM
တာပဲ ပြန်ဆက်လိုက်ပါ... :)
ADDRESSEE September 25, 2009 at 10:01 AM
ကိုလူထွေး September 25, 2009 at 11:58 AM
စိမ်းရဲ့ ကဗျာတွေကို ကြိုက်လို့လာဖတ်တာပါ...
yangonthar September 25, 2009 at 12:07 PM
မစိမ်းရဲ့ ကဗျာတွေ ကြိုက်တယ် နောင်... တ.... မ.... ရ.... ဘဲ ဖတ်သွားတယ် .....အစပ်အဟပ် သိပ်မိတာပဲ .... ကောင်းတယ်ဗျာ
Angel Shaper September 25, 2009 at 3:16 PM
နောင်တမရ တတ်လို့ပါ။ ဟိဟိ
ကဗျာလေး တကယ်ကောင်းတယ် မစိမ်းရယ်။
အိပ်မက်ခြေရာ September 25, 2009 at 5:00 PM
ဂွတ်ရှယ်ပဲ စိမ်း ဆိုတဲံအတိုင်း စကားလုံးစိမ်းစိမ်းတွေ
ပွင့်အံထုတ်နေတာကိုး အဟိ ရှုးတိုးတိုးတိတ်တိတ် မန့်သွားတယ်သိလား ဘူမှပြောနဲ့ ခွိ
စည်သူ September 25, 2009 at 10:22 PM
ဖတ်ဖူးဘူးဗျ.. အခုမှ ဖတ်ဖူးတာ..
ဖတ်ဖူးတယ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး
Anonymous September 25, 2009 at 11:55 PM
chanye` September 26, 2009 at 1:29 AM
ခါးထိရော့မယ်ဆိုပဲ။ ဒင်း..အိပ်နေတုန်း ဆံပင်တွေ၇ိတ်ပြီး ရောင်းစားမှ
Vista September 26, 2009 at 3:26 AM
ဆံပင်ရှည်တွေဝယ်ဒေ ......... ဟိဟိ
အနော် September 26, 2009 at 8:09 AM
နောင် တ မ ရ ကြေး တဲ့ လား စိမ်း ရေ
မင်းနေဝေး September 26, 2009 at 6:38 PM
cbox မှာအော်မရလို့ .. ဒီမှာအော်ခဲ့တယ် ..
မောနင်း .... :)
Anonymous October 2, 2009 at 6:58 AM
အာ..ဟား... လန်ထွက်နေတာပဲ ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ ဖြစ်မယ်..။
အဲလောက်ထိလဲ အသည်းမမာပါနဲ့ဗျာ... ခုမှ တကယ်ချစ်မှန်း သိလို့နေမှာပေါ့....။
littlebrook October 5, 2009 at 1:58 AM
နောင်တမရကြေးပေါ့ဆိုပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ စာလုံးလေးတွေခွဲရေးထားတာက မပြောချင်ပြောချင်
မပြောရက်ဘဲ ပြောထွက်လိုက်ရတဲ့ပုံပါလေ ..
နောင်... တ... မ... ရ ... ကြေး ..ပေါ့
အဲ့လို စကားကိုတစ်လုံးချင်းပြောတတ်ကြတယ် ..
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးက ပေါ့ဆိုတာလေးထည့်ထားတော့
အပေါ်က မပြောချင်ပြောချင်ပြောတယ်ဆိုတာက အလေးသာသွားရော ...
ဟီးဟီး ... လျောက်ပြောကြည့်တာနော် . စိတ်မဆိုးနဲ့
နွေး October 12, 2009 at 1:24 AM
Copyright 2009 - စိမ်း...
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ... ကဗျာရူး စာရူး တစ်ယောက်လက်တည့်စမ်းချင်လို့ လုပ်ထားတာ... ကျမ ဒီဘလော့ဂ်မှာရေးတဲ့ ၀တ္ထုများ၊ ကဗျာများမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်၍သော်လည်းကောင်း၊ ၀တ္ထုဖတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ သီချင်းနားထောင်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ကြားဖူးနားဝများကိုသော်လည်းကောင်း စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထားခြင်းသက်သက်မျှသာဖြစ်ပါတယ်... ထို့ကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်အား ထိခိုက်နစ်နာမှုတစ်ခုခုသော်လည်းကောင်း စိတ်အနှောက်အယှက်တစ်ခုခုသော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ရှိသော် တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်သာဖြစ်ကြောင်းနှင့် နစ်နာစေလိုသောဆန္ဒ စိုးစဉ်းမျှမရှိကြောင်း ၀န်ခံပါသည်ရှင့်...
အိပ်မက်အကြီးကြီးစိုက်လို့ ယုံကြည်ချက်တွေလောင်းလောင်းပြီး ပျိုးခဲ့သမျှ တလွဲပွင့်တွေချည်း ပွင့်နေတဲ့ ကန္တာရစိမ်းပင်တစ်မျိုး...
သြော် ပန်ကာ ... ပန်ကာ...
၂၁ ရာစု သစ္စာ
သေမျိုးအတူတူ .. ဘာလို့ မတူခွဲချင်တာလဲ
Nyi Min San . com
Free up memory in OSX Mavericks
YE LWIN OO . COM
ကျမချစ်သော မြင်ကွင်းများ ( စစ်တွေအလွမ်း)
ရင်ဝေးကြယ် (Yin Way Kyal)
The Blood in My Heart!
Me Myself & TKG
အသည်းကွဲပုရပိုဒ် ရဲ့ သွေးစက်များ